Home Wararka Xiisadda ciidamada PSF iyo Deni oo meel sare gaartay
Waxaa weli taagan oo sii xoogeysatay xiisadii ka dhalatay xil ka qaadistii uu madaxweynaha Puntland Saciid Deni ku sameeyay Agaasimihii ciidamada difaaca Puntland ee PSF, waxaana illaa hadda lagu guuleysan in xilka lagu wareejiyo agaasimaha cusub.
Ciidamada Amaanka Puntland ayaa 24-kii bishaan si adag uga horyimid xil ka-qaadista Maxamuud Cismaan Diyaano, waxayna bilaabeen inay baneeyaan qaar kamid ah Saldhigyadii ay kaga sugnaayeen duleedka magaalada Boosaaso.
Wasiirka Amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan ayaa warbaahinta hanjabaad adag u mariyay hogaankii ciidamada PSF ee ka gadoodsan xil ka qaadista Agaasimaha, isaga oo sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in colaad laga abuuro magaalada Boosaaso.
Gallan oo shirka jaraa’id ay ku wehlinayeen Taliyaha guud ee ciidamada difaaca General Yaasiin Cumar Dheere iyo Saraakiil kale ayaa sidoo kale waxa uu ku booriyay Agaasimihii hore ee PSF inay qaadin dhalinyarnimo, islamarkaana ay suno-dowladeed tahay xil ka qaadista iyo magacaabistaba.
“Agaasimaha cusub ee PSF-ta waxaa loo magacaabay in uu buuxiyo dal-daloolada muuqda maadaama dagaallo culus ay galeen waa in derajooyin la siiyaa, Ciidanku waa in aysan kasoo bixin xeryahooda, amarka ka qaataan Taliyaha cusub ee loo magacaabay” ayuu yiri Wasiir Gallan.
“Cid kasta oo qal-qal gelineysa amniga Boosaaso ma aqbali doono, Maxamuud waxa aan leeyahay Dhalinyaronimo yaanay ku qaadin oo aqbal xilka in aad wareejisid sidii shalay laguugu wareejiyay oo kale.”
Sidoo kale Taliyaha guud ee Ciidamada Difaaca Puntland, General Yaasiin Cumar Dheere ayaa ka digay in xil ka qaadista iyo wareejintaba ay sababaan isku dhac dhex mara Ciidamada iyo qalalaase ka dhasha tallaabo labada dhan ay qaadaan, sida uu hadalka u dhigay.
Saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in Saraakiisha Ciidamada PSF ay jawaab ka bixiyaan shirka jaraa’id ee qabteen mas’uuliyiinta maamulka Puntland iyo hanjabaada kasoo yeertay wasiir Gallan iyo Taliyaha Ciidamada difaaca Puntland.
Previous article[Buur Madow] Dowladda Shabab Dir baa madax ka ah. “Daawo”
Next articleQoraal ka soo baxay hogaanka ciidanka PSF ee xiisadda Boosaaso
Somaliland oo bilaabaysa barnaamijyo lagu wacdi galinayo dowlada DFS & shacabka...